विनयजंगविरूद्ध सपना रोका मगरले दिइन् प्रहरीमा जाहेरी (भिडियो हेर्नुस्) – SamayaNepal | हरेक सत्य तथ्य खबरमा ……. विनयजंगविरूद्ध सपना रोका मगरले दिइन् प्रहरीमा जाहेरी (भिडियो हेर्नुस्) – SamayaNepal | हरेक सत्य तथ्य खबरमा …….
विनयजंगविरूद्ध सपना रोका मगरले दिइन् प्रहरीमा जाहेरी (भिडियो हेर्नुस्)
सामाजिक सञ्जाल युट्युवमा अनेक टिप्पणी गर्दै चेतावनी दिएका विनयजंग बस्नेत विरुद्ध सपना रोका मगरले उजुरी दिएपछि प्रहरीले विनयजंगको खोजी थालेको छ । उनी फरार रहेको बताइएको छ । बीबीसीले विश्वका एक सय प्रभावशाली महिलाको सूचीमा सपनालाई राखेपछि विनयजंगसंग सपनाको विवाद सुरु भएको थियो ।
सपनाले छुट्टै संस्था दर्ता गरेर सामाजिक काम गर्न थालेपछि यो विवाद अझ बढेको बुझ्न सकिन्छ । सपनालाई अनेक लाच्छना लगाउँदै विनयले सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गर्दै आएका थिए । सपना रोका मगरले उनीहरुद्ध जाहेरी दिएपछि प्रहरीले पक्राउ गर्न खोजी सुरु गरेको हो ।
प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक अशोक सिंहले उजुरु दर्ता भएपछि पक्राउ पुर्जीका लागि अदालतमा पुगेको बताए । पुर्जी जारी भएपनि बस्नेतलाई पक्राउ गरिने उनले जानकारी दिए।
बस्नेतले युट्युव च्यानललाई दिएको अन्तरवार्तामा सपनाका नां’गा तस्वीर देखाइदिने ध’म्की दिएपछि बिबिसीको प्रभावशाली महिलाको सूचीमा परेकी १८ वर्षीया मगरले प्रहरीमा जाहेरी दिएकी हुन् ।
सपनाले बस्नेतविरूद्ध अ’भद्र व्य’वहा’र’को मु द्दा जाहेरी दिएकी हुन् । उनका अनुसार बस्नेत अहिले काठमाडौं बाहिर छन्। प्रहरीले उनको खोजी गरिरहेको छ। यसअघि सपना र बस्नेतले मिलेर बेवारिसे शव ज’ला’उने काम थालेका थिए।
यस अघि सपना र उनका बुवा आमाले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादललाई पनि भेटेर उजुरी त्यसवारे जानकारी दिएका थिए । गृहमन्त्रीलाई दिएको निवेदनमा पनि सोही कुरा उल्लेख छ । उनले आफुलाई विनयजंग र उनका सहकर्मी पवित्रा लामा विरुद्ध पनि उजुरी दिएकी छन् ।
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको February 15, 2021 February 15, 2021 145 Viewed